कोशी अनलाइन सोमबार, ०८ असोज, २०७५ मा प्रकाशित
दैनिक जीवनमा मानिसले राम्राखालका मोबाइल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय आएका मोबाइलमा क्यामेरा पनि निमै राम्रा हुन्छन् ।
तैपनि, मानिसले ठूला र राम्रो लेन्स भएका क्यामेरा किनिरहेका हुन्छन् । व्यावसायिक मानिसले त यस्ता क्यामेरा किन्ने भइहाले । तर, सामान्य मानिस पनि अहिले फोटोग्राफीको सोख पूरा गर्न राम्रा क्यामेरा किन्न आतुर हुन्छन् ।
क्यामेरा कसरी किन्ने ? किन्दा के–के कुरामा ध्यान दिने ? त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ :
– यदि तपाईं व्यावसायिक फोटो खिच्नुहुन्न र बजेट पनि पर्याप्त छैन भने तपाईंका लागि डिजिटल क्यामेरा सबैभन्दा उत्तम हुन सक्छ ।
– त्यसो त डिजिटल क्यामेरामा डिएसएलआर क्यामेराका तुलनामा कम फिचर हुन्छन् । यसको लेन्स नै फरक हुन्छ । तैपनि, फोटो खिच्न जान्नेले डिजिटल क्यामेराबाटै पनि राम्रा–राम्रा फोटो खिच्न सक्छन् ।
– सामान्यतः पार्टी, पिकनिक वा घरेलु रूपमा फोटो खिचिन्छ भने क्यामेरा किन्दा सेमी–डिएसएलआर क्यामेरा खरिद राम्रो हुन्छ । तर, यसमा लेन्स फेर्न भने पाइँदैन ।
– यदि तपाईं व्यावसायिक रूपमा फोटो खिच्नका लागि क्यामेरा किन्दै योजनामा हुनुहन्छ भने बहुउपयोगी लेन्ससहितको क्यामेरा किन्नु राम्रो हुन्छ । डिएसएलआर क्यामेरामा लेन्स फेर्न पाइने भएकाले व्यावासायिक फोटोग्राफरका लागि यस्तो क्यामेरा उत्तम हुन्छ ।
– सामान्यतः क्यामेरामा दुई तरिकाले विषयलाई हेर्ने सुविधा दिइन्छ । एउटा ‘भ्यु फाइन्डर’बाट हेर्नु हो भने दोस्रो ‘एलसिडी स्क्रिन’बाट ।
यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कि, एलसिडीबाट विषय हेरी खिचेका फोटा कम राम्रा हुन्छन् । आर्थत्, भ्यु फाइन्डरबाट हेरेर खिचेका फोटा गुणस्तरका हिसाबले निकै राम्रा हुने गर्छन् ।